RW:ku-xigeenka dalka oo xog-waraysi la qaatay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Caafimaadka. | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta RW:ku-xigeenka dalka oo xog-waraysi la qaatay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Caafimaadka.
RW:ku-xigeenka dalka oo xog-waraysi la qaatay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Caafimaadka.
Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka xukuummadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) oo maanta kormeeray xarunta wasaaradda caafimaadka dalka ayaa kulan xog-waraysi ah la qaatay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka Wasaaradda.
Wasiirka caafimaadka XFS Marwo Fowsiya Abiikar Nuur ayaa Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka uga war-bixisay hannaanka ay u socdaan hawlaha wasaaraddu ay u hayso bulshada Soomaaliyeed, waxyaabaha u qabsoomay iyo qorshayaasha horumarinta caafimaadka ee wasaaradda.
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka ayaa ku amaannay wasiirka, Wasiir ku-xigeenka, Agaasimaha guud iyo dhammaan shaqaalaha wasaaaradda caafimaadka shaqada ay hayaan, waxa uuna ku dhiirri geliyay in ay sii laba jibbaaraan si loogu guulaysto tayaynta caafimaadka dalka loona wanaajiyo bed-qabka ummadda Soomaaliyeed.
“Kormeer shaqo ayaan maanta ku tegay wasaaradda caafimaadka, waxa aan la kulmay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda, waxa aan indhaheyga ku soo arkay hawsha wanaagsan ee ka socota”. Ayuu yiri Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka dalku.
Sidoo kale R.W Ku-xigeenka ayaa yiri “Kormeerkan waxa uu qayb ka yahay dadaallada lagula soconayo gudashada xilka iyo waajibaadka saaran wasiirrada, waxa aan u hambalyaynayaa wasiirrada sida wanaagsan ee ay u shaqeynayaan waxa aan leeyahay halkaas ka sii wada kormeerraduna waa sii socon doonaan”.
Kormeerka ayaa qayb ka ahaa howlaha kor-joogteynta lagula socdo shaqooyinka wasaaradaha xukuumadda iyo hey’adaha kale ee dawladda, qorshahaas oo ku salaysan isla xisaabtan, hufnaan iyo daah-furnaan, si mar walba loola socdo hadba horumarrada la gaaray iyo dar-dar gelinta howlaha hor-tebinta leh ee wasaaradaha iyo hay’adaha dawladda u yaalla.